ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့် မရနိုင်တာလဲ | ဧရာဝတီ
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့် မရနိုင်တာလဲ
January 7, 2013 | Hits:18,375
အစိုးရတပ်ဖက်မှ လေကြောင်း ပစ်ကူမှုများဖြင့်ပါ တိုက်ခိုက်လာသောကြောင့် ဗုံးခိုကျင်းတူးကာ တိမ်းရှောင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသော ဒေသခံ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် မိသားစုတစု (ဓာတ်ပုံ – လဖိုင် / ဧရာဝတီ)
၁၇ နှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားပြီးနောက် ၂၀၁၁ ဇွန်လမှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်တို့ အကြား တိုက်ပွဲတွေဟာ တနှစ်ခွဲကျော် ကြာလာပါပြီ။ အခု ရက်ပိုင်းထဲမှာ အစိုးရ တပ်ဖက်က အရေးပါတဲ့ စခန်းထောက် တောင်ကုန်းတခုကို သိမ်းဖို့ လေကြောင်း ပစ်ကူမှုတွေကိုပါ အသုံးပြုလာလို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်က စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာကြတဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာပါတယ်။
အစိုးရတပ်ဟာ KIA ကို မကြာခဏ အင်အားသုံး ထိုးစစ်ဆင်တယ်၊ ဆွီဒင်လုပ် အဆင်မြင့် လက်နက်တွေကို သုံးစွဲနေတယ်၊ တဖက်က ငြိမ်းချမ်းအတွက် ကမ်းလှမ်းနေပြီး တဖက်က ထိုးစစ်တွေ တပြိုင်တည်း လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး KIA ဘက်က ပြောဆိုသလို အစိုးရတပ်ဖက်ကလည်း KIA ဟာ တံတားတွေ၊ လမ်းတွေကို မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီးတယ်၊ ကြိုတင် အသိပေးထားလျက်နဲ့ ရိက္ခာပို့တဲ့ အစိုးရတပ် လမ်းကြောင်းတွေကို ကြားဖြတ် တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီး ပြန်လှန် ဝေဖန် ပြောဆိုမှုတွေ တွေ့နေရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အွန်လိုင်းနဲ့ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ တိုက်ပွဲ အကျအဆုံး၊ စခန်း သိမ်းယူမှု စတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အပြိုင်အဆိုင်တင်၊ အချက်အလက်တွေ တပြိုင်တည်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်နေကြတာကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးပြီး အအေးဒဏ် ပြင်းတဲ့ ဆောင်;ရာသီမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့၊ ထောက်ပံ့မှုတွေ ကောင်းကောင်း မရတဲ့ ဒုက္ခသည် ၇ သောင်းခွဲလောက် ရှိနေပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နီးတဲ့ ကချင်ဒေသဟာ ကျောက်စိမ်းအပါအဝင် သဘာဝ သယံဇာတတွေ ထွက်ရှိပြီး စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ခရိုနီတွေ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားခဲ့ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်းကလည်း သမိုင်းရှည်လျားတဲ့ ပဋိပက္ခ အရင်းအမြစ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်ရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကချင်နဲ့ အပစ်မရပ်နိုင်သေးပေမယ့် အရင် စစ်အစိုးရ တဖက်သတ် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေက လုံးလုံးလျားလျား လက်ခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ မြေပေါ်မြေအောက်၊ ရေပေါ်ရေအောက် သဘာဝ သယံဇာတ အားလုံးကို နိုင်ငံတော်က ပိုင် ဆိုင်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး ဒီအချက်ကို ပြင်ကာ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်ပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြနေတာတွေကလည်း မတင်မကျ အခြေမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ဖို့၊ အစိုးရစစ်တပ် အောက်ကို ဆွဲသွင်းဖို့ ဖိအားပေးခဲ့ခြင်းတွေကလည်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ အတားအဆီးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော လက်ပူတိုက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမျိုးဟာ ကချင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးကို ဘယ်လောက် အာမခံနိုင်မယ်ဆိုတာလည်း မသေချာတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ KIO ဘက်က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနေသလို အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း အပစ်ရပ်တာ အရင်လုပ်ဖို့ ညှိနှိုင်းရင်း အခုလို အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
-ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ KIA တို့နဲ့ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဆင့်ဆင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုတွေ ၁၁ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်တိုင် ပြေလည်မှု မရနိုင်ဘဲ ရှိနေတာ ဘာကြောင့်လဲ။
-တကယ် လက်တွေ့ကျပြီး ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ။
စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ဒီဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
(ဧရာဝတီက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ရေး သတင်းများကို ဒီနေရာမှာ ပြန်လည် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်)
51 Responses to “ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာကြောင့် မရနိုင်တာလဲ”
Kachins signed the Pang Long Agreement to form the Union of Burma. Kachins are the founding members of the Union. But they were cheated by the Burmans. The KIO signed Peace Agreement with SLORC. Kachins participated in drafting the constitution. But when KIO refused to transform the KIA into Border Guard position, the SPDC started labeling them as “Thaung Kyan Thu”. And the KIO was denied from registering to compete in the 2010 election.
How many times should Myanmars cheat the Kachins? Now, instead of having dialogue, Myanmar government is assaulting the Kachins using fighter jets and helicopters. Do the Kachins deserve this kind of treatment? Absolutely “NO”. Myanmars are not the only group who owns the Union. The Union belongs to all of us. Did the ethnics signed the Pang Long Agreement to put themselves slaves to the Burmese? Are the Myanmars expecting us to bow at their feet? Is it the reason for founding the Union?
I understand that kachin, Shan, Chin and other ethnics are cheated and betrayed from pan long aggrement to form union by burmese nationalist . Generations of all ethnics are fighting for their rights, their freedom, their land and their culture. I support KIA that this is their right to defend thier race and land from monopolise by burmese government. The road to jade land (Pha kant) had never been upgrated by the burmese gov despite earning billion of US $ by selling jade and mining permits. Why? There are thousand reasons for that. Not just kachin but also Shan state. There are hyro power projects, mining and main boarder trading with china, Shan state still can’t get electricity. But the electricity is lighting in every roads of Nay pyi daw.
ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီ သလောက်ပြောရရင် ကေအိုင်အေ သူပုန်ထ တာဟာ ဦးနုလက်ထက် အများကိုးကွယ်သော ဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာ အဖြစ် ပြဌာန်းပေးခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပူတာအိုဒေသမှ အခြား တိုင်းရင်းသားများ သူပုန် မထသောကြောင့် ကေအိုင်အေ ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင် နော်ဆိုင်း တရုတ်ပြည် တွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူး၍ ကေအိုင်အေ တို့က တရုတ်ပြည်မှ အကူအညီကို မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း တရုတ် တို့ကမူ နောက်မှလာသူ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်း လက်နက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး ကေအိုင်အေ တို့ ကို ထိုကဲ့သို့ အခွင့်ထူးများ မပေးခဲ့ပါ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကေအိုင်အေ တို့ နယ်မြေ အချို့ဆုံးရှူံးခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး တပ်မတော်နှင့် အပြစ်အခတ် ရပ်ဆဲ ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရှိ နာဂသောင်းကျန်းသူများ အတွက် တရုတ်မှ ထုတ်ပေးခဲ့သော လက်နက်များကို ဝယ်ယူ၍ တပ်မတော်ရန်မှ ကာကွယ်ရန် အားထုတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုကာလများ အတွင်း တပ်မတော်မှ တရုတ် အထောက်အပံ့ခံ ကွန်မြူနစ် တပ်များကို သာ ဦးစားပေး ထိုးစစ်ဆင် ခဲ့၍ ကေအိုင်အေ တပ်များ အနေချောင်ခဲ့လေသည်။ ထိုကာလမှ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး မယူခင်ကာလ အတွင်း ကေအိုင်အေနှင့် ကေအိုင်အိုသည် ခြုးနှစ်ကောင် တံဆိပ် ဘိန်းထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ တပ်မတော်စစ်စခန်းများ မှ ခိုးထုတ်လာသော ကျောက်စိမ်းများကို တဘက်တိုင်းပြည်ပို့ရာတွင် နယ်မြေဖြတ်သန်းခ ကောက်ခံခြင်း၊ ဆပ်ကြေးကောက်ခြင်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ထဲတွင် ဗုံးခွဲခြင်း၊ ရထားလမ်းဗုံးခွဲခြင်း စသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
စစ်တပ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး စစ်တပ်ကဲ့သို့ သစ်ထုတ်ခြင်း ၊ ကျောက်စိမ်းတူးခြင်း သတ္တုတူးခြင်း စသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခင် ကွန်မြူနစ် ပါတီ တပ်မဟာမှူး စခုန့်တိန့်ယင်း ဦးစီးသော တပ်များကဲ့သို့ သစ်တောများ အပြောင်းခုတ်ခြင်း၊ သတ္တုများ အပြောင်ထုတ်ခြင်း စသာ အခွင့်အရေးများကို အစိုးရမှ မပေးခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံး ကေအိုင်အေ တို့ စိတ်နာနေသော တရုတ် တို့ မြစ်ဆုံတွင် ရေကာတာ တည်ဆောက်မှု ပြဿနာမှ စတင်ကာ ကေအိုင်အေ တို့တောခိုခဲ့သည်။
ကေအိုင်အေတို့တောခိုခဲ့သော်လည်း စစ်စခန်းများ အသေအချာ မဆောက်ထားခြင်း ၊ လက်နက်ငယ်များကို သာ အားကိုးနေရခြင်း၊ ပိတ်မိနေသော အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ဓားစာခံ အဖြစ် ဖမ်းမထားပဲလွှတ် ပေးထားခြင်း စသော အားနည်းချက်များကြောင့် တပ်မတော်မှ ကေအိုင်အေ ကို ဗန်းမော် လွယ်ဂျယ်လမ်းမှ အောင်မြင်စွာ ထုတ်နိုင်ခဲ့လေသည်။
ဧရာဝတီ အနေဖြင့် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်။
Yes… 100% agree with you. The greedy Kachin leaders brain-wash the young Kachin people and let them die for them in battle with burmese army and others.
The root cause of civil war in our country is the greed for the natural resources. It is ridiculous they ask for some percentages from the resources government finds in Kachin State. The right way they should approach to the issue is to check and log in the complaint if the government does not do anything to develop their places, but keep taking the resources.
Do not tryagain to release your lying propaganda. We never and ever believe you. Do not release just like your manipulate system. Nowaday all people known who is wright and who is wrong. A fake history, you are poison.
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးခေါင်းဆောင် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နှင့် သခင်ထွန်းအုပ်၊ ဗစိန် ဂိုဏ်းမှ လူကြီးများ ၏ အစီအမံဖြင့် တရုတ်ပြည်တွင် ကွန်မြူနစ် တို့ထံမှ လက်နက်သွားတောင်းရန် သခင်အောင်ဆန်း ကို စေလွှတ်ခဲ့ရာမှတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်တို့ နှင့် အဆက်အသွယ် မရခဲ့သော်လည်း အမွိုင်ကျွန်း( ရှမန်) တွင် ဂျပန်လူမျိုး ဗိုလ်မိုးကြိုး နှင့် အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပြီး ဂျပန် အကူအညီဖြင့် စစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့နှင့် အတူ အင်္ဂလိပ်တို့ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့ရသည်။ တရုတ်ပြည်မမှ ချန်ကေချိတ် ၏ ဆိုးသွမ်းတပ်မတော်ကို မြန်မာပြည်မှ အောင်မြင်စွာမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်ခေတ် စတင်သည်နှင့် ဗမာ့တပ်မတော်မှ အောက်ခြေ အရာရှိများက ကရင်လူမျိုးများကို စတင်လက်စားခြေ သဖြင့် ကရင်-ဗမာ အဓိကရုန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး သခင်အောင်ဆန်းက ကရင်လူမျိုး ခေါင်းဆောင်များကို တပ်တွင်းရာထူးကြီးများပေးကာ စ ည်းရုံးခဲ့ရလေသည်။ ၁၉၄၅ တွင် အခြားတိုင်းရင်းသား အင်အားစုများနှင့် အတူ တပ်မတော်သည် ဖက်ဆစ်ဂျပန် တို့ကို အောင်မြင်စွာ တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်တို့ စွန့်ခွာသွားသော ရန်ကုန်မြို့ကို ဗမာ့တပ်မတော်မှ ဗိုလ်နေဝင်းမှ ဝင်ရောက်နေရာယူပြီး ရန်ကုန်ကို သိမ်းလိုက်ကြောင်း လိမ်ညာကြေညာခဲ့နိုင်ခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်ကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရပါသည်။ စစ်ကြီး အပြီး ဂန္ဒီ စာချုပ်အရ ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများ ၏ ထုံးစံ အတိုင်းး တပ်မတော်ကို အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အောက်တွင် ထားရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဗိုလ်အောင်ဆန်း စစ်တပ်မှ အနားယူကာ နိုင်ငံရေးလောကထဲသို့ ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။
သခင်အောင်ဆန်းမရှိပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်တို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဗမာခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်လက်ယာ နှင့် ဗိုလ်ဇေယျ တို့ပါဝင်ပြီး ကျန်ရဲဘော် အများစုမှာ ဗိုလ်မှူးအောင် ဦးစီးသော ပြည်သူ့ရဲဘော် အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
လွပ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှု ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း တပ်မတော် အရာရှိများ သူရဲဘောကြောင် ကာ ရန်သူများ မရောက်မှီ တပ်စခန်းစွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခြင်းကြောင့် အရပ်သား အစိုးရ အထိနာခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ သောင်းကျန်းမှု ထူပြောနေသော်လည်း ဗိုလ်နေဝင်း နှင့် ဗိုလ်ဇေယျတို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးနေရာကို သာ ကြိုးစားပန်းစား တောင်းဆို နေသည်မှာလည်း ဗဟို အစိုးရ အတွက် အထိနာစရာပါ။ ဗိုလ်ဇေယျ တောခိုသွားပြီး ဗိုလ်နေဝင်း တစ်ယောက်သာ အာဏာရပြီးမှသာ တပ်မတော်မှ ခုခံသဖြင့် အင်းစိန်တိုက်ပွဲနှင့် မန္တလေးမြို့သိမ်း များအောင်မြင်ခဲ့ကာ ဗဟိုအစိုးရ အသက်ရှုချောင်သွားခဲ့ရသည်။
စစ်တပ်နှင့် ကွန်မြူနစ် တို့ တိုက်ခိုက်ရင်း စစ်တပ်ထဲတွင် ကွန်မြူနစ်မုန်းသော သူများတိုးလာခဲ့ပါသည်။ တပ်မှ ကွန်မြူနစ် မုန်းသော ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဗဆွေကို ထောက်ခံခဲ့သော်လည်း ဖဆပလ ဥက္ကဌ ဦးနု ဝန်ကြီးချုပ်ပြန်လုပ် သဖြင့် တပ်နှင့် အစိုးရ သဘောထားကွဲလွဲခဲ့သည်။ အိမ်စောင့်အစိုးရ လက်ထက်တွင် တပ်မတော်မှ တည်မြဲ နိုင်မည် ဟု ယူဆကာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့သော်လည်း သန့်ရှင်းနိုင်သွားသဖြင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ စိတ်ညစ်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။ သို့သော် အာဏာလွှဲပေးခဲ့သည်။
KIO/ KIA ဆိုတာ ကချင်လူမျိုးတွေအတွင်းက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းဖြစ်လို. ကချင်လူမျိုးနဲ. ကချင်ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်လို.မြင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တုန်းက ဗမာလူမျိုးတွေရဲ. BIA ဆိုတာပေါ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ BIA ဆိုတဲ့ တပ်မတော်က လွတ်လပ်ရေးခေတ်မှာ ဗမာလူမျိုးတွေက နေပေါ်လာတဲ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗမာလူမျိုးတွေကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သလို KIO/KIA ဆိုတာဟာလဲ အဖိနှိပ်ခံ ကချင်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဖို. ကချင်လူမျိုးတွေကိုကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ KIO/KIA စဖွဲ.တော့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းက စလို. KIO/KIA ဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ်ရရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်ဖို. တိုက်ပွဲဝင်နေတာဒီနေ.အထိပါပဲ။ ဒါကြောင့် KIO/KIA ဟာ ကချင်လူမျိုးများကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ. မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပြည်ထောင်စုအစစ်ဖြစ်လာဖို.၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို. KIO/KIA က တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရဖို.အတွက် ဗမာ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ. ကျန်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို.လိုပါတယ်။ ဒီလိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးနိုင်ဖို. အစိုးရတခုထဲနဲ.မလုံလောက်ပါဘူး။ လူတန်းစားအလွှာစုံကတန်းတူအခွင့်အရေးပေးချင်စိတ်ရှိရပါမယ်။ ငါတို.က ဗြဟ္မမျိုး၊ ထီးနဲ. နန်းနဲ.နေတာဆိုပြီး ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေထက်ခေါင်းတစ်လုံးပိုချင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ စစ်ပွဲတွေမငြိမ်းချမ်းနိုင်တာကလဲ ဗမာတွေအများစုနဲ.ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ စစ်တပ်က ကချင်ပြည်နယ်ကိုကြိုက်သလိုစိုးမိုးချယ်လှယ်နိုင်ဖို. KIO/KIA ကိုအပြုတ်တိုက်ချင်နေလို.သာဖြစ်ပါတယ်။ KIO/KIA ကတောင်းဆိုနေတာဟာလဲ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ဖို.သာဖြစ်တယ်။ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းတွေဟာ ပင်လုံကြောင့်ဗမာပြည်မနဲ. လွတ်လပ်ရေးအတူယူခဲ့ကြတာမို. ပင်လုံကိုလေးစားပြီး ပင်လုံအတိုင်းသာသွားမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ. အဓိကနိုင်ငံရေးပြသနာဟာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူရေးပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒုတိယမှပါ။ ဒီမိုကရေစီရလဲ တန်းတူမရရင်၊ တရားမျှတမှုမရှိရင် ကချင်ပြည်နယ်တင်မကပါဘူး၊ မြန်မာပြည်ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Absolutely true. Self-determination and federalism were promised by the Pang Long Agreement. Period. Federalism was understood by the Myanmar Dictators as separatism. It was absolutely wrong. Our governments failed to unite but destroyed from every corner. Look at Mandalay. It is becoming like Chinese capital in Burma, many Chinese in Mandalay do not speak Burmese because many of them arrived there lately through corrupt immigration officials. Illegal Bengali immigrant issue in Rakhine state also is the proof too. The elite generals make themselves so wealthy while every ordinary citizen including the Burmese are left so poor. We cannot even compete the Thais who were not so great before military took power. Who is to blame? The governments and their mismanagement.
ကျွန်တော် တို့ကိုဗြိတိသျှ တွေ အုပ်ချုပ် နေတာ မကြိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ လွပ်လပ်ရေး တောင်းဆိုနေတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းရင်းသား တွေကို လည်း ကျွန်တော် တို့လို လွပ်လပ်စေချင်လို့ ကျွန်တော် တို့ ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ နေရာကို လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် တို့လာတာ ခင်ဗျားတို့ကို လာအုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ လူမျိုးတွေပဲ ခင်ဗျားတို့ အုပ်ချုပ်ကြ။ ကျွန်တော် တို့ ဗမာတွေက ကျွန်တော် တို့ကို ဘယ်သူမှ လာ အုပ်ချုပ်တာ မကြိုက်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်လူမျိုး ကိုမှ အုပ်ချုပ်ဖို့ မစဉ်းစားဘူး။ ဦးအောင်ဆန်း ပင်လုံ တွင် ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှတ်ချက်
However the Myanmars now treat ethnic peoples like secondary citizens. The Myanmars make themselves lords over the ethnics on their own lands. Aung San said one thing but the Myanmar Governments have been doing different thing.
We all know how burmese army violated human rights by killing ethnics minority, raping the innocent women and underage girls, torturing the villagers,robbing and burning their lands ..etc..
The burmese army killed not just the students but also buddhist monks known as 1997 saffron revolution.Never in the history of burmese army killed buddhist monks brutality till senior general than shwe era. When the navy of bangladesh confronted burmese navy regarding about the dispute the marine territory, burmese navy back down and withrawn from the disputed area. to cut short, burma lostaisland and some parts of marine territory to bangladesh. Still the burmese army generals claimed the victory for burma. How stupids the burmese generals are..
I think,Not much difference between you and generals.
I am proud of bringing down Burma to the bottom of the world, the poorest of the poor. But we the generals are extremely wealthy. As long as we have everything we want, who care who is dying and who is hungry?
KIO and KIA was founded to resist the Burman hegemony and superiority. They asked for equality and self determination among the union. Their propaganda machine said they are only fighting because the Kachins are suffering from inequality and suppression from the Burmese. But what really happened. Look back to their 43 years of resistance and what are the outcome. Starting from formation of KIA, the strategy and KIA use were very brutal and narrow minded. Claiming that they were resisting the Burman hegemony, they themselves act like superior being among the ethnic people in Kachin states. Even in the KIA ranks, only the Jingphaw Kachin can go up to the higher ranks. Even closer cousin like Lishaw and Lisu were not allow to serve in higher ranks. For the Shans ethnic, formation of KIA was the starting of their 43 years long nightmare in Kachin state. When Shans refuse to co operate with KIA, KIA punished them by burning the whole villages, torturing Shan elders and raping shan girls as young as 8 years old. In the Mogaung and Monyin area, the KIA brutality force the ethnic Shans to form local militia backed by the government. But majority of Shans in the other part of Kachin state has no choice but to follow KIA. Remember our Shans are the second largest in the union and second largest ethnic in Kachin state. But beingapeaceful people we were cordial enough to forgive KIA. We ourselves as Shans see ordinary Kachins as our own brothers. And never took revenge on the ordinary Kachins.
But the latest developments in Kachin state in forcing Shans to their limits. In facts Shans elders in the KIA infested area are asking government to arm them so that they can fight with KIA. For us Shans in Kachin state even KIA win the battle and establish Kachin state, we will suffer because of the KIA brutality and Kachin hegemony. So we will have no choice but to establish our own army to defend ourselves. Therefore for the part of KIA, forget about Burman hegemony and superiority, please takealook at how our Shans are suffering in Kachin state because of KIA hegemony. If KIA want equality and self determination and if KIA want to get treated like equal one, please treat other ethnic in the Kachin state equally first. Otherwise you are the same evil as you suppose to resist. For our Shans, our patients are running thin. We just don’t want to be the grass between two fighting bull. But we are human being too. We really wish to live peacefully among the union and still see normal Kachins as our brothers. Otherwise in the long term it will be Shan Vs Kachin instead of KIA Vs Burmese army. I am sure that nobody want to fight especially among our brothers. Therefore I beg you KIA and KIO, please come to government initiated peace negotiation as soon as possible. This is the best time in the history of our union. I really wish we can honestly talk to each other and resolve our differences. Even old die hard KNU and our SSA are talking to the government. When everybody willing to come to negotiation, why are KIA refusing? Is there any hidden agenda among the KIA elite? The hsitory will tell who is the villain. I really cried for every one dying due to these infighting. Stop fighting and please come to negotiation table our brothers.May peace be upon Kachin land and god bless you.
**Author isaShan ehtnic from Mogaung, Kachin state,who is working as an Engineer in overseas, and Irrawaddy please don’t edit my comments.***
The Pang Long Agreement already guaranteed Self-determination, my man. It was long before KIO/KIA was founded. Unfortunately, Aung San was assassinated and the Pang Long Agreement was ignored and neglected by the latter government led by U Nu. If you areareal Shan, you are part of the great history because Union of Burma was formed at Pang Long of Shan State. If you try to write about the Kachins, write it down rightly. Because the Kachins did not just wake up and fight the Burmese for no reason. The reason rooted deep when the Pang Long Agreement was ignored by the Burmese. The Burmese leaders badly betrayed you and betrayed me and betrayed our brothers and sisters, Kachins. If you wife broke your marriage vow and cheated on you, how would you react? Our partner of founding the Union, Burmese, cheated us so badly. That was the core reason the Kachins sadly went into underground. Who the hell in the world would like to sacrifice too many lives for small thing? None. But the Kachins have good reasons to sacrifice so many lives. It is to reclaim what they lost to the crooked Burmese. The Kachins just ask to get back what was robbed from them by the Burmese. I amaproud citizen because I amadescendant of the founder of the Union even though the Burmese people messed it up.
တပ်မတော်တွင်း အာဏာသိမ်းလိုသော ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ကြည်မောင်၊ ဗိုလ်မောင်မောင်နှင့် ဗိုလ် တင်ဖေ တို့ ဦးဆောင်ကာ အာဏာထပ်သိမ်းရန် ကြံနေစဉ် ရှမ်းပြည်အရေး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် စစ်တပ်အာဏာထပ်ရလာခဲ့သည်။ စစ်တပ်အာဏာရပြီးနောက် တောခိုကွန်မြူနစ်များ နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကေအန်ဒီအိုများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း စသာ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် အလံနီနှင့် ကေအန်ဒီအို ခေါင်းဆောင်များ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုအပြင် တောခို ကွန်မြူနစ်ဗိုလ် ရဲထွတ်ကို အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခိုင်းခဲ့သဖြင့် ပြည်သူထောက်ခံမှု ပိုမိုရရှိလာကာ ကွန်မြူနစ်ငယ်သားများ လက်နက်ချ အလင်းဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် တိုင်းပြည်ဒေသ တော်တော်များများ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသော ဗိုလ်အောင်ကြီး ကို ထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်း နှင့် လယ်လုပ်သူ လယ်ပိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး စာတတ်မြှောက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း စသော လုပ်ဆောင်မှုများကလည်း ပြည်သူများ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံမှု ကို ပိုများစေခဲ့ပါသည်။ သို့သော် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် ကြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နစ်ဆင်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး နောက်ပြန်လှန့်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်းကို ဖန်တီးကာ တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် ကြိုးစားခြင်း ၊ ရှမ်းစော်ဘွားများ အာဏာစွန့်ရာတွင် အစိုးရမှ ပေးထားခဲ့သော လျှော်ကြေးငွေဖြင့် ဝယ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းခြင်း စသော အကြောင်းများကြောင့် တရုတ်တို့က ကွန်မြူနစ်တို့ကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ရှမ်းပြည်တွင် သူပုန် ထခြင်း စသော ဆိုးကျိုးများကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲ နှင့် အတူ ပြည်တွင်းဆူပူမှုများ များပြားလာပြီး တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန်၏ ဘိန်းများကို စစ်အရာရှိပေါက်စများဖြင့် သယ်ဆောင်စေခဲ့သဖြင့် တပ်မတော် နာမည်ပျက် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အမေရိကန် မှ ဘိန်းစစ်ဆင်ရေး အကူအညီဖြင့်ပေးသော လက်နက်များကို ဗကပများကို ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် ထုတ်သုံးခဲ့သည် ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို အကျိုးဆက်၏ တရားခံဖြစ်သော အမေရိကန် CIA နှင့် ရင်းနှီးသော ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်တင်ဦးကို ထုတ်ပစ်ခဲ့သော်လည်း တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ကျဆင်းခဲ့ကာ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းပေါ်လာခဲ့သည်။
ကျနော့် ကွန်မန်း ရေးတိုင်း မပါတာ စိတ်မကောင်းပါ
ငြိမ်းချမ်းရေးက နှစ်ဖက်လုံး လျော့ရမှာ လက်ဝှေ့ထိုးသလို တယောက်က မထိုးရင် သူများကို့ကို အလဲထိုးလိုက်ပါ့မယ်။
စစ်တပ်လဲ လျော့ဖို့လိုသလို ကေအိုင်အေလဲ လျော့ရပါ့မယ်။
ခုလို တိုက်နေလို့လဲ နိုင်မယ်ထင်နေလို့လား ကချင်ပြည်သူတွေပဲ အထိနာမှာပါ။
အစိုးရက ကမ်းလှမ်းရင် လေသံက ခပ်မာမာ အတိုက်ခံရတော့ အသံကျယ်ပြန်ရော။
ဟိုတလောက ကချင်စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ လယ်သာ ဆိုဖာမှာ ဇိမ်ကျကျ အင်တာဗျူးပေးတာလဲ ကြည့်ရပါတယ်။ တော်လှန်ရေးသမားက အဲလောက်တောင် ဇိမ်ရှိတာလား
ကျနော် နိုင်ငံခြားမှာ ၁၀နှစ် အလုပ်လုပ်နေတာတောင် အဲလိုအသားတံဆိပ်ခပ် လယ်သာ ဆိုဖာ မထိုင်ဖူးဘူး။ ဝယ်လဲ မဝယ်နိုင်ပါဘူး
ဒါကြောင့် နှစ်၆၀ ကြာတာနေမှာ။
ပြီးတော့ တခြားတိုင်းရင်းသား တွေက အပစ်ရပ် အရင် ရပ်ထား ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ် လက်ခံထားတာ
ကေအိုင်အေက ဘာအခွင့်ထူး ခံချင်လို့လဲ
ကေအိုင်အေက something special လား
အခြားတိုင်းရင်းသားနည်းတူ ကေအိုင်အေက ဘယ်တုန်းက ညီညွတ်ဖူးလဲ။
အမျိုးသား ညီလာခံတုန်းကလဲ ဒေါက်တာ တူးဂျာ တို့ပဲ အူယားဖါးယားဖြစ်နေတာ။
ဘာနိုင်ငံရေးမှ လဲ နားလယ်ပုံမရဘူး
ကချင်ပြည်သူတွေ ရော ဒီစစ်တိုက်နေတာ ကေအိုင်အေ ကို ထောက်ခံပါသလား
စစ်တပ်အနေနဲ့လဲ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားကို အမြစ်ပြုတ် တိုက်ဖို့ မသင့်သလို ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
ကျနော်ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်စေချင်ပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း မရှိစေချင်ဘူး။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ တိုင်းရင်းသားစစ်တပ်တွေလဲ မရှိသင့်တော့ပါဘူး
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေလဲ ပြင်သင့်ပါပြီး။
ကျနော် ပြောချင်တာက အကောင်းမြင်စေချင်ပါတယ်
တိုက်နေသတ်နေကြရင် အခြေနေ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်
ဦးသိန်းစိန် ထိုးစစ်မဆင်ဖို့ ကြေငြာတုန်းက ကေအိုင်အေ ဘာလို့ မကြေငြာနိုင်တာလဲ ကျနော် သံသယရှိတယ်
ခုကြားရတဲ့ သတင်းက တရုတ် ဆီကတဲ့။
ကချင်ပြည်ကို တရုတ်ကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ထိုးရောင်းတော့မှာလား ကေအိုင်အေ ရေ။
ဗမာတိုင်း မရိုင်းပါဘူး။ မြစ်ဆုံတုန်းက ခင်းဗျားတို့ထက် ဗမာတွေ ပိုလုပ်ခဲ့တာ သတိရပေးပါ။
ကိုလူလေး ခင်ဗျားပြောတာ တော်တော် များ များ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ် ကို တိုင်းပြည်ရောင်းစားတယ် ဆိုတာ အစိုးရဗျ။ ဒါလေး တစ်ခုတော့ ခင်ဗျားမှားနေပြီ။
why did u delete my comment?
ဗိုလ်နေဝင်းသည် အယောင်အဆောင်ကောင်းသော စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သည်။ လက်ဝဲဝါဒ ကို ယုံကြည်သူ မဟုတ်သော်လည်း လက်ဝဲညီညွှတ်ရေး အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ် ဆိုသည်ကို မသိပဲ ဦးကျော်ငြိ်မ်း နောက်လိုက်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ကို နားမလည်ပဲ မား နှင့် အာဏာရှင် စနစ်ကို ပေါင်းစပ်ကာ စစ်ပလိပ် တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ပြည်မြုိ့တွင် လမ်းဘေး ဘူးသီးကြော်သည် တစ်ယောက် က တိုင်းပြည်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက် နေသည်များကို တင်ပြခဲ့သဖြင့် မျက်ရည်ကျချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အလိမ်အညာကောင်းသော လူကြီး သည် ပြည်သူများ သူကို မကြိုက်ကြ၍ ဆင်းသည် ဟုဆိုကာ TV တွင် အငိုမိန့်ခွန်းပြောပြီး တပ်မတော်တွင် အဆိုးဝါးဆုံး တပ်မှူး တစ်ယောက်ကို သူ့နေရာပေးကာ ဆင်းသွားခဲ့သည်။ ဗိုလ်နေဝင်းမှ ထိုသူကို ပရမ်းပတာ လုပ်ခိုင်းခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည် ပိုဆူအောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ တဘက်မှလည်း စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်သစ်များကို မီးစိမ်းပြပြီး တိုင်းပြည်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် မှု မှ ကာကွယ် ရန် ဆိုသော ကောလဟာလ ကို ဖြန့်ခဲ့ ကာ ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့၍ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။
တပ်မတော် သမိုင်းကြောင်း(ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေခေတ်)
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်နေဝင်း ကိုယ်တိုင် selection ရွေးထားသော စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်ကို စစ်ဖိနပ်အောက်ထည့်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးဆုံး၊ အ ရက်စက်ဆုံး နှင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ အဘုန်းဆုံး အစိုးရ တစ်ရပ်ကို ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပါတီကို ခြေမှုန်းပစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို သူပုန်များဟု ယူဆကာ မြို့ပြင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခင်က ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ ကို အားပေးသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်မှ အချိန်မရွှေး ကျူးကျော်လာနိုင်ဆိုသော အကြောက်တရားဖြင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးအား ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အချို့ဒေသများတွင် အမေရိကန် ရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဟု ဆိုကာ ရူးကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်များဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများအား စစ်သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန် နှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းသည်ဟု ယူဆရသော SSAနှင့် KNU ကို ဖိတိုက်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်တွင် အဆိုးဆုံး ကိုမောင်လှ နှင့် ကိုလွန်းသီ ကို ထုတ်သုံးကာ ကရင် စခန်းများ တစ်စခန်းပြီး တစ်စခန်း သိမ်းခဲ့သည်။ NLD ပါတီဝင်များကို လည်း အမေရိကန် သူလျှိုများ အဖြစ် သမုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပယမ်းပတာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် ဗမာ့ တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်သော အစိုးရ လက်နက်ကြီးကျည်များ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ မကြာခဏ ကျရောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ကြောက်ရသဖြင့် လေယာဉ်ပျံများကို ထုတ်မသုံးသော်လည်း အမြှောက်များကို သုံးကာ KNU အားဖြိုခွဲခဲ့သည်။ အမေရိကန်တပ်များ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ တဆင့် ဝင်ရောက်ခွင့် မပေးရန် လာဘ် ထိုးသည် ဟု ဆိုကာ ထိုင်းနိုင်ငံသားများကို သစ်တောများ ရောင်းစားခဲ့သည်။ တစ်ဘက်တွင်လည်း အစိုးရ မီဒီယာများမှ ထိုင်းနှင့် အမေရိကန် မကောင်းကြောင်း နေ့စဉ်နီးပါး ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပါတီ ကို တစ်စစီဖြစ်သွားအောင်ဖြိုခွဲ ပစ်ခဲ့သဖြင့် အမေရိကန် ပိတ်ဆို့မှု နှင့်တိုးခဲ့ရသည်။ ဒီပဲယင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပါတီ ကို အပြီးသတ် ချေမှုန်းရန် ကြိုးစားသဖြင့် ကမ္ဘာ၏ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းကို စစ်တပ် ခံစားခဲ့ရပါသည်။ တပ်မတော်ကို မြို့တိုင်းရွာတိုင်းတွင် ရှိစေရန် စစ်တပ်ကို တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို အဆမတန်သုံးစွဲခဲ့သည်။ စစ်အင်အား တိုးချဲ့ရန် ကလေးစစ်သားများ စုဆောင်းခဲ့သည်။ စစ်တပ်များတည်ဆောက်ရာတွင် လည်း ဒေသခံများအား အခမဲ့ လုပ်အားပေးခိုင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသခံများထံမှ လယ်များ သိမ်းယူခြင်း ကြောင့် ဒေသခံများ ဘဝပျက်သွားခဲ့ရပါသည်။ စစ်တပ်ရံပုံငွေ အဖြစ် ဘိန်းများကို ကုန်သည်များ အမည်ခံကာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှ တင်ပို့ခဲ့သည်။ တဘက်တွင်လည်း စစ်လက်နက်ဝယ်ရန် နှင့် မြောက်ပိုင်းရှိ လက်နက်ကိုင် တပ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ယခင်က မတည့်သော တရုတ်တို့နှင့် ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တရုတ်တို့အား မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတများ ရောင်းစားခဲ့သည်။ တရုတ် လက်နက် အစုတ်များကို ဝယ်ယူကာ KNU ကိုတိုက်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရန်မှကာကွယ်ရန် ဟု အကြောင်းပြကာ မြောက်ကိုးရီးယား နှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ လုပ်ခဲ့သည်။ နျူကလီးယား လက်နက်ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပန်းခဲ့သည်။ သို့သော် တရုတ်မှ အရပ်ဝတ်လဲခိုင်းသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲခေါ် မဲခိုးပွဲကျင်းပကာ စစ်ဗိုလ် လူထွက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရကို တင်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း တပ်မတော်၏ အမှားကြီး တစ်ရပ်မှာ ပြည်မမှ စစ်ဗိုလ်များကို တိုင်းရင်းသားဒေသများ တွင် တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်သည် ပင်လုံစာချုပ်ကို တွင်တွင်ကြီးချိုးဖောက်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဖားကန့်ဒေသတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်ရင်းနှီးသော ကုန်သည်ကြီးများ ကျောက်ကွက်ရကာ ဒေသခံစီးပွားရေးကို များစွာ နစ်နာခဲ့ပါသည်။
It will be great if you mention the articles from Pang Long Agreement Treaty. The people deserve to know the root cause of the Union’s problem. The ethnics(especially, Kachins, Shans and Chins) feel betrayed because of disrespect on the agreement they signed with the Burmese leader, Aung San, by the latter governments including U Nu’s government. Today’s conflicts are just the outcome from that betrayal. The root virus must be contained if the Thein Sein administration is serious for our beloved Union.
Country name itself is Union of Burma. The government should be Union Government. And the present national flag must be changed to another design with 8 stars (7states + bamar state), to add bamar ethnic group. After post colonial period, it was started with Bamar Government. It was not Union Government. Ethnic Groups and people were assimilated and discriminated by Myanmar Governments both politically and religiously until now. After 1988 there were onlyafew foolish ethnics guys enter into Myanmar army to beasoldier. But the rest of Ethnics people avoid to join. So, Myanmr army is Myanmar army.It is not the Union army.Today Myanmar army is only formed by Bamar people(Majority Group). But, 90% of bamar people didn’t notice about this Political game except the generations of Regime starting from 1949. So, ethnics groups, people and their armies never trusted Myanmar Government because there were unfaithful and untrustworthy along the history even to their own bamar people. They closed their people’s eyes, intellectual, social life and all rights. If someone or groups followed, agreed and signed with Myanmar Government who will loosed all, day by day and year by year. And then they will loose even their ethnic identity because of bamarnization. That’s why tribal armies and groups are defending for their rights, their lands, their people and their identity. And now, Kachin Land is Kachin own, not belong to Myanmar. So do Kayin, Chin, Shan, Rakhine and there arealot of ethnics people and lands more than 153 ethnics groups. In this battle between Kachin VS Myanmar, it isakind of colonial battle. They want to colonize as much as they can because Kachin land is full of natural resources. Whatever they successes they will build Buddhist Monastery and leave there so called spy monks. And now every body know, Myanmar army was attacking with flights but the army representative speaker dare to lie that they didn’t do it. But after world noticed they announce that they did it. How shameful they are. It is really shameful government and army. How their civilians will trust them. So, if the government has no sense to talk for national reconciliation and if they still want to lie on the Pinlong Agreements the conflicts and fightings between Myanmar and Ethnic groups will never end. Even now the peace between Myanmar government and other groups were also not peace just CEASEFIRE. It is just pausing the battles. Ethnic groups didn’t recognize that Myanmar government were unfaithful and lying all the time since 1947 to until now. But Kachin group know about (myanmar government’s is untrustworthy). So, other groups could not help in this moment. It is Myanmar brain. But we believe that this brain will live not so long in the Myanmar history. This brain will die very soon.
သမိုင်းတွေ ရာဇ၀င်တွေ ဟိုး ရှေးရှေးတုန်းက အခြေခံတွေ ထားပါတော့။ လက်ရှိမှာ ကချင်ပြည်သူ အများစုက အေးအေးချမ်းချမ်း တရားဥပဒေနဲ့ အညီ နေချင်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကချင်ပြည်နယ်ကို လာတော့ ၀မ်းသာအားရ၊ အားကိုးတကြီး ကြိုဆိုကြတာ တချို့ ဗမာနယ်တွေထက် သာသေး။ ပြောချင်တာက ကချင်ရယ်၊ ဗမာရယ် ပြောမနေပဲ သည် အာဏာရူး ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ဆိုတာ ခွဲ ပြောရမယ်။ ကချင်လူမျိုးတွေကို နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တာ ဗမာတွေ မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်က၊ အဲသည်စစ်တပ်ထဲ လူမျိုးစုံ ပါတယ်။ လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်တောင် ဗမာ မဟုတ်ဘူး။ မွန်လူမျိုး မင်းအောင်လှိုင်။ စစ်တပ် အကြီးအကဲတွေ လောဘ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းသလို ကချင် ခေါင်းဆောင်တွေကရော တကယ်ပဲ ကချင်လူမျိုးတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် သည်စစ်ပွဲ နွှဲနေတာလား။ သူတို့ မိသားစု၊ သားသမီးတွေရော အဲသည်စခန်းတွေမှာ ရှိနေသလား။ နိုင်ငံခြားမှာ ပို့ထား၊ ကျောင်းကောင်းတွေ တက်နေကြသလား။
Hi Taiyin thu,
It is from Bamar Perspective , not from ethnics perspective. Remember, all the Burmese government are liar. They cheated us from the very beginning , precisely from 1947. Cheating after cheating. Plundering natural resources along with Burmanization of all ethnics area. If you really wants to get genuine Unity, you will have to do more research and work harder instead of promoting Bamar.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာတုန်းက ကြိုခဲ့ကြတာမှန်ပါတယ်။ သူ.အနေနဲ. ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းကို တစုံတခုပြောမယ်၊ မှတ်ချက်ပေးမယ်လို. မျှော်လင့်ပြီးကြိုခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမ ဘာမှပြောမသွားခဲ့ပဲ သူမ ပါတီအကြောင်းနဲ. ဒီမိုကရေစီတရားချသွားတဲ့အတွက် ကချင်လူထုတွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကို အာဏာရူးစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ဆိုပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲလွဲချလို.မရပါဘူး။ တိုင်းပြည်မှာအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို တိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူညီမျှရေးဖြစ်ပြီး၊ အဲ့တာကို မူအရသော်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ.အရသော်လည်းကောင်းကျင့်ကြံဖို.လိုပြီး ဗမာတွေအားလုံး (အထူးသဖြင့်ပညာတတ်လူတန်းစား) တွေအနေနဲ. နားလည်၊ လက်ခံ၊ ကျင့်သုံးဖို.လိုပါတယ်။ ဒါမှ လွတ်လပ်တရားမျှတပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာဖြစ်လာမှာပါ။
I think KIA should be broad-minded. Please don’t make youths to be ethnocentrism.
R u Saya Gyi lar?? Have you ever hard about Pinglong agreement? if you didn’t, go and read it ok? Burmese King even kill their father to getaKing position… so no wonder they kill Kahcin civilians to get Kachin Land… No Burmese King ruled Kachin Land, understood?
ပထမဆုံး ဧရာဝတီကို ကျေးဇူးတင်တယ် ပြောပါရစေ။
ကချင်ကိစ်စ ကို ရှမ်းပြည်မှာနေခဲ့တဲ့ မွေးခဲ့တဲ့ ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး မျက်ချေမပြတ်အောင် အသက်၅၆ နှစ် ပညာတတ် အရွယ်ရှိပြီး တသက်လုံး မြန်မာပြည်အနှံ့ရောက် သွားလာပြီး ဘ၀အမျိုးမျိုးကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဗမာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောပါမယ်။
ကျွန်ဘ၀ကလွတ်ဖို့ ပင်လုံညီလာခံခေါ်စပြီုး ပြည်မ နဲ့ တောင်တန်းပေါင်းရတယ်။
ကချင် လာပေါင်းတယ်။ ဖ ဆ ပ လ က ဗမာပြည်သူကိုတာဝန်ခံပြီး ဗိုလ်ချုပ်က တိုင်းရင်းသားတွေကို အာမခံ ဂတိ ပေးခဲ့တယ်။
တောင်တန်းသားတွေ ခွဲမထွက်ချင်အောင် ဗမာတွေ တာဝန်ယူရမယ် တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
ဥင်္းနု ဗိုလ်နေ၀င်း န၀တ နအဖ အခု ဦးသိန်းစိန် ဘာ အာမခံချက်မှမပေးနိုင်သေးဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဂတိ ထက်ပိုတဲ့ အာမခံချက်လိုနေတဲ့ ဒီအချိန်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သေနတ်အရင်ချသင့်တဲ့ အစိုးရတပ်က နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာကို ကချင်ကို ပထမတာဝန်ယူဖို့ ညှိနှိုင်းပြီး မယူဘူး မယူနိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးတည်ချက် မူဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့လိုလားချက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူရမှာ
အဖြေက အစိုးရက တာဝန်လွှွှဲဖို့ မရှိဘူး။ ကချငိကလည်း တာဝန်ူယူနိုင်ဖုိ့ဖယ်ဒရယ် အစိုးရ အဆင့်နဲု့ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လိုတယ်
အရင်ဖြေရှင်းဖို့က ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လုပ် ကိုယ်တိုင်ပါတဲ့ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကိုအရင်လုပ်ပြီုး သဘောတူညီချက် ရအောင်မလုပ်နိုင်တာကစပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဝေးနေတာ လို့ယုံကြည်တယ်။
Kyaw Kyaw Lwin,
You hit the very core point. What we all want is peace and freedom in the Union. I thought Thein Sein would follow Aung San’s footstep to rebuild the Union since he spoke loud to the wotld that he was committed to lead us intoademocratic society(Instead he is now dragging his feet). Actually he keeps following his big brother, Than Shwe’s footstep. Pang Long Treaty was not signed by the ethnic leaders to transfer themselves into the Burmese colonial rule from the British colonial rule, but till today, the ethnics never get independence at all. Independence on January 4, 1948 from Great Britain was just for the Burmese only, and for the ethnics, even worse Burmese colonial rule keeps going on and on. The Thein Sein administration offers Peace Talk to the KIO, but what the KIO has been asking for the last many decades is political dialogue, not just peace dialogue. How clear is that?
There were no discussion about minority and majority because of the case of narrow or broad minded issue BSPP by U Ne Win in his era. The assassination of Ethnics leaders and Soa Phas by Ne Win can terminated all voices . And also Wudura Thakhin Chit Maung issued or reported to Paliament to bullying with the SEATO.
So the history of Ethnics and revolution were different from the history of Burma and insurgency between all people of union and bloodline of tyranny.
Now we can call for the national congress made by ourselves without guide line of administration and parties just LUDU SANDA.
Every successful peace talks can be made by just people with conflicts parties without plan A after plan B and after plan C.
U Thein Sein respectful speeches we heard ” people centered”,” the parental people” such as the real authorization or real decision maker and real policy makers and real law makers mean the government by the people , of the people and from the people if he realize his idea.
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ဗိုလ်နေဝင်း ကိုယ်တိုင် selection ရွေးထားသော စစ်ခေါင်းဆောင်များ သည် တိုင်းပြည်ကို စစ်ဖိနပ်အောက်ထည့်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆိုးဆုံး၊ အ ရက်စက်ဆုံး အစိုးရ တစ်ရပ်ကို ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပါတီကို ခြေမှုန်းပစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို သူပုန်များဟု ယူဆကာ မြို့ပြင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခင်က ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ ကို အားပေးသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်မှ အချိန်မရွှေး ကျူးကျော်လာနိုင်ဆိုသော အကြောက်တရားဖြင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးအား ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အချို့ဒေသများတွင် အမေရိကန် ရန်မှ ကာကွယ်ရန် ဟု ဆိုကာ ရူးကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်များဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများအား စစ်သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
စစ်တပ် ဘယ်လိုပဲ ဆိုးဆိုး ငမိုက်သားတွေကတော့ စစ်သားလုပ်အုံးမှာပဲံ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ကမ္ဘာပျက်တောင် မရဘူးကွ။
ဦးသိန်းစိန် က အပစ်ရပ်ခိုင်းတော့ တပ်မတောကအပစ်ရပ်ခဲ့ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ ကေအိုင်အေ က
အပစ်မရပ်တဲ့အပြင် လမ်းတံထားတွေ မိုင်းထောင်မှုတွေ ပိုများလာတယ်၊မြို့ရွာတွေ မှာ ဆက်ကြေးကောက်မှုတွေပိုများလာတယ်၊ လူသစ်စုဆောင်းမှုတွေ ပိုများလာတယ်၊ သူိုတ့နဲ့
အဆင်မပြေ သူတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုတွေလည်း များလာတယ်၊အစိုးရတပ်တွေ ကိုလည်း
ကေအိုင်အေ ကဘဲ ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် တပ်ရင်းတစ်ရင်းလုံး သေကြေဒဏ်
ရာရှိခဲ့ကြပါတယ်၊ အစိုးရတပ်က အပစ်ရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ ပြည်သူ
တွေ ဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ် ရမလဲ အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊အပစ်ရပ်ခိုင်းတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကိုတောင်
အပြစ်တင်မိတယ်၊ အစိုးရတပ် ကို အပစ်ရပ်ခိုင်းတဲ့ ဘယ်ပြည်သူ၊ဘယ်ပါတီ၊ဘယ်အဖွဲ့
အစည်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက မှ ကေအိုင်အေ ကို လမ်းတံတား
မိုင်းမခွဲဖို့၊ပြည်သူတွေ ကိုဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုဖို့၊ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေဆီက ဆက်ကြေးမကောက်ဖို့ကိုတော့မတားကြဘူး၊နှုတ်ဆိတ်နေကြတယ်၊အခုကျွန်တော်ရေး
တာကိုမယုံရင်တော့ ကချင်ပြည်နယ်ကို (၁)လ(၂)လလောက် လာနေပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသား
တွေကို တိတ်တဆိတ် လာရောက်စုံစမ်း နိုင်ပါတယ်၊
တပ်မတော် သားများ၏ ယုံကြည်ချက်
တပ်မတော် သည် ကရင် သောင်းကျန်းသူများ ကို တိုက်ထုတ် လိုက်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည် အား ကယ်တင်ခဲ့သည် ဟု တပ်မတော် သား အများစု က ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ကို ကွန်မြူနစ် ရန်မှ ကာကွယ်ခဲ့သည် ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
ရှမ်းပြည် ပြည်ထောင်စု မှ ခွဲထွက်ရေး ကျြိးပန်းမှု တွင် အောင်မြင်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သူမှာ တပ်မတော်သာ ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သားများယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော် သည် ၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်း တွင် အကြမ်းဖက် သမားများကို နှိမ်နင်းခဲ့ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲ ကျမှုမှ ကာကွယ် ခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နှင့် ရင်းနှီးသော ဗိုလ်မြဦးစီး KNU ကို ၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အပြင်း အထန် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်အားဖြင့် တိုင်းပြည် နှင့် ကရင် ပြည် ကို အမေရိကန် ရန်မှ ကာကွယ်ခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်၏ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတများကို သောင်းကျန်းသူ များ လက်ထဲမှ ကာကွယ်ခဲ့သည် ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တိုင်းပြည် ကို ဒီမိုကရေစီ စနစ် ထူထောင်ပေးသူဟု တပ်မတော် သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တိုင်းပြည် ကို ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စက်မှု နိုင်ငံတော် အဖြစ် ထူထောင်နိုင်သူ များသည် တပ်မတော် သာ ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြသည်။
တိုင်းပြည် ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရန်မှ ကာကွယ်ခဲ့သူများ အဖြစ် တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တိုင်းပြည်တွင် ပညာအတတ်ဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံး သူများသည် တပ်မတော် ကို အားပေးသူများ ဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်မှ လွဲ၍ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း မှ တိုင်းပြည် ကို မအုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော် သည် တိုင်းပြည် အတွက် အနစ်နာ အခံဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သား များယုံကြည် ကြပါသည်။
တပ်မတော်သားများသည် သာ အတော်ဆုံး ၊ အတတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်သည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် အမြဲပေးဆပ်နေသည်ဟု တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် နိုင်သော အရည်အချင်းရှိကြောင်း တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
တပ်မတော်သည် ဆင်းရဲသော တရုတ်ပြည် နှင့် အန္ဒိယ ထို့ထက် တိုင်းပြည်ကို ချမ်းသာ အောင် အုပ်ချုပ်နိုင်သူများ အဖြစ် တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြသည်။
တပ်မတော်သည် သာ တိုင်းပြည်ကို ဂုဏ်ရောင် ၀င်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူများ အဖြစ် တပ်မတော်သားများ ယုံကြည်ကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ယုံကြည်မှုများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်မတော်သည် ဗမာလူမျိုးများကြားတွင် အောင်မြင်မှု နှင့် ထောက်ခံမှု များ ရရှိခဲ့သော်လည်း တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ခုခံမှု များကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။
တပ်မတော်ကို ဂန္ဒီစာချုပ်အရ ဖွဲ့စည်း ခဲ့စဉ်က တိုင်းရင်းသား များ ပါဝင်ခဲ့သည် ဆိုသော်လည်း ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် အာဏာရ ဖဆပလ တို့ အာဏာလု မှု ပြဿနာများ ကြောင့် တပ်မတော် တစ်စစီပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တပ်မတော်သည် ဗမာတိုင်းရင်းသား အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရပါသည်။
သခင်အောင်ဆန်းသည် စစ်ပြီးခေတ် ဗမာ့တပ်မတော်( ယနေ့ခေတ် ဗမာ့တပ်မတော်တွင် ပါဝင်အမှု မထမ်းဖူးပါ။
သို့သော် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး သည် စစ်တပ် နောက်ခံမရှိပဲ တိုင်းရင်းသား များနှင့် ပင်လုံစာချုပ် ကို အောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆို နိုင်ခြင်း က တိုင်းရင်းသား များ ဖက် က အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်အောင်ဆန်း ကို လေးစားပြီး တပ်မတော် ကို မလေးစားသည့် အဓိက အကြောင်းဖြစ်နေပါသည်။
ထိုတိုင်းရင်းသား များ နှင့် တပ်မတော်သားများ ၏ ယုံကြည်ချက်ကွာခြားနေခြင်းက ပြည်တွင်းစစ် မီး မငြိမ်းနိုင်သည့် အကြောင်းအရင်း ဟု ယူဆမိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီအတိုင်း ဆို တပ်မတော် တစ်ခု လုံး အခြောက်တိုက် ဘဝင်မြင့်ပြီး ရူးသွားပြီ ထင်ပါရဲ့။
သူတို့ ထင်တာနဲ့ အပြင်မှာ လူအများစု ထင်တာက တခြားစီ။
တပ်မတော် လား စစ်တပ်လားလို့ သေသေချာချာ နားလည်စေချင်ပါတယ်။
တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူ လူထု လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပြည်သူကပေါက်ဖွားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုပါ။
စစ်တပ်ဆိုတာ ပုံသွင်းရိုက်ထည့်နိုင်သူက ဗိုလ်လုပ်ပြီး ရိုက်သွင်းခံချင်သူက နောက်လိုက်လုပ်ပြီး စုပေါင်းရပ်တည်တာစစ်တပ်ပါ။
ကချင် အရေးက စစ်တပ်က ၀င်ရှင်းလေ ရှုပ်လေဘဲ။
လူထု နဲ့ ကာယကံရှင် နှစ်အုပ်စု သပ်သပ် တစ်ဖက်စီ ရှင်းရမှာ။
ယုံကြည်တာ ကို သက်ကာယ ဒိဌိ လို့ ခေါ်တယ် သမ်မာဒိဌိက တော့ မှန်ကန်စွာ ယုံကြည်ခြင်း သဒ်ဓါ တရားရှိမှ ယုံကြည်ပါ ကိုယ်ကောင်းစားတယ် ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ် ဆရာတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ် စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ် အဖေလည်းပြောတယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်နေရင် ရိုက်သွင်းခံရတာသေချာပြီ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တတိုင်းပြည်လုံးအေးချမ်းဖို့ ဆိုတာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်… တကယ့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကကြိုက်တာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ် မကြိုက်တာလဲရှိနိုင်ပါတယ်…မြန်မာပြည်ချစ်သူတိုင်းက ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုလိုလားတယ်… ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ရမယ်… မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့ Myanmar Containment Policy ဆိုပြီး နယ်စပ် ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင် ဖန်တီးချင်နေတဲ့ သူတွေရှိနေသလား… အဲ့ဒီဖန်တီးမှုကိုလိုက်ပါ အကောင်အထည်ဖော်လိုတဲ့ ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်းလိုနေနေရတဲ့ဘ၀ကို မက်မောနေတဲ့ တရားဥပဒေ ဘောင် အတွင်းကချမ်းသာ တိုးတက်လိုတဲ့စိတ်မရှိတဲ့ လက်နက်အားကိုးနဲ့အစိုးရကို ကလန်ကဆန်လုပ်ချင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ရှိနေသလား… ဒါဆိုဒီနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး အလှမ်းဝေးနေမှာ သေချာပါတယ်…မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ပါလီမန်ဖဆပလခေတ်မှာ တရုတ်ဖြူကူမင်တန်ဆိုတဲ့ အနောက်အုပ်စုကထောက်ခံတဲ့ ဒီမိုကရေအဖွဲ့ကိုတိုက်ခဲ့ရပါတယ်… ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ ကွန်မြူနစ်လက်နက်ကိုင်ကို တိုက်ခဲ့ရပါတယ်… ပါတီစုံစနစ်ထူထောင်မယ်ဆိုပြီး အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနေချိန်မှာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရခဲ့လို့ အနောက်အုပ်စု၏ပိတ်ဆို့ အရေးယူခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်…နိုင်ငံရေးပါတီတွေ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေရခဲ့လို့ ရွေးကောက်ခံအစိုးရနဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နဲ့ ခန့်ခန့်ငြားငြားခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် အဖက်ဖက်က လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရမယ့်အချိန်မှာတော့ နယ်စပ်ဒေသ ၅ နိုင်ငံရှိတဲ့ အထဲက ဘယ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ အခြေအနေတွေ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေတယ် ဘယ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ အခြေအနေတွေ ဆုပ်ယုတ်လာတယ်ဆိုတာ..သုံးသပ်ကြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်… မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ချုပ်ငြိမ်းမသွားအောင်နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေသလဲ တွေးကြည့်ရင်ပြေးကြည့်တာထက် မှန်ပါလိမ့်မယ်..KIA ဆိုတာအသုံးချခံ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ယစ်မှူးနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်သာဖြစ်တယ်… စစ်မတိုက်ရဘဲ စစ်ပွဲတွေရပ်ဆဲပြီး ဥပမာ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီလိုမျိုးဖွဲ့ အခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးလုပ် ဒီလိုဖြစ်ရင်အလွန်ကောင်းပါမယ် ကျမပြောတာကတော့အရမ်းလွယ်တာပေါ့ရှင် KIA အနေနဲ့ Mind Set change ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းစည်းရုံးဖို့ဆိုတာတော့..ဆိုတာကတော့..ဆိုတာကတော့…ဆိုတာကတော့…….
pyi ma thar
တပ်မတော်အနေဖြင့် KIA/KIOကို အမြစ်ပြတ် တိုက်သင့်သည်။ ပြီးရင် ကချင်ဒေသကို ထူထောင်ရေး လုပ်ပေးရပါမည်။ တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုနေသော တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်မဒေသက လူတွေကလဲ ကောင်း/ဆိုးကို အတူတူခံစားနေရတာကို သိစေချင်ပါသည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် KIA/KIOကို အမြစ်ပြတ် တိုက်သင့်သည်။ ပြီးရင် ကချင်ဒေသကို ထူထောင်ရေး လုပ်ပေးရပါမည်။ တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုနေသော တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်မဒေသက လူတွေကလဲ ကောင်း/ဆိုးကို အတူတူခံစားနေရတာကို သိစေချင်ပါသည်။ ဗမာဖြစ်ပြီး အခွင့်အရေးမရသူ၊ ဆင်းရဲနေသူ အများကြီးပါ။ အဆင်မပြေလို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေကြရတာ သင်တို့မြင်နေကြမှာပါ။
တို့ တပ်မတော်၏ စေတနာဖြင့် တည်ထောင်ထားသော ဗိုလ်ချုပ် ချမ်းသာ ပြည်သူ ဆင်းရဲ တိုင်းပြည်ကြီး တွင် ကချင်တွေလည်း ငမွဲ အဖြစ် ဗမာများ နှင့် တန်းတူ နေထိုင်နိုင်ပါကြောင်း ရဲရဲကြီး အာမခံပါသည်။
မှန်လို်က်တာ R zar ရယ်။ စစ်သားတွေ ဆိုတာ ဘာမှ မရပါဘူး။ သူတို့ ဗိုလ်ချုပ် တွေ အိမ်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေ နှင့် ခန့်ထားတဲ့လူတွေပါ။
တပ်ထဲက စစ်သားတွေ အထက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ပြန် မပြောနိုင်မချင်း တန်းတူညီမျှ ဆိုတာ မပြောနဲ့ လူမွှေးပြောင် ရင်တောင် ကံကောင်း။
ပြောတော့ တိုင်းပြည် အတွက် စစ်တိုက် ရတယ်လေး ဘာလေးနဲ့။ သူ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ အတွက် စစ်တိုက်နေရတာ……
မင်းကကချင်ငါကရှမ်းသူကကရင်ဟိုကရခိုင်တို့ကတော့ဗမာကွလို့ဆိုနေသမျှတော့မြန်မာပြည် ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။အားလုံးမြန်မာဖြစ်နိုင်တဲ့တနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီး ငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ ရဲ့ သဘောထား တူညီချက်မရသေးလို့ပါ။ ဥပမာ၊ ဗမာတွေ က ထမင်းစားချင်တယ် KIA က ခေါက်ဆွဲစားချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် က ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ဘဲလေ။ နှစ်ဖက်စလုံး မျှမျှတတ နဲ့ အဖြေရှာကြပါ၊ အကောင်းဆုံးက မြောက်ကိုးရီးယား ကို ဥပမာယူလို့ရတယ်။ ငါးပွင့်ဆိုင်၊ခြောက်ပွင့်ဆိုင် ပုံစံတွေလို စမ်းလုပ်ကြည့်။
Haha…for all the myanmar critics
One day myanmar will become one of the province of china, if burmese army keep on fighting kachin. Then burmese will know who they are. At leaset myanmar will be better than now.
the military must understand the rule of law and go back to the barrack.
I am waiting for year 2015 with the landslide victory of NLD in the election.
The rule of law will come to Burma.
Until such time, the army will keep raping the Burma as they wish.
Do they understand that crimes against humanity they are committing will come back to haunt them
when the rule of law come into force?
No one can stop them.
President Thein Sein is one of the puppets of the military establishment.
အစွန်းရောက်သောမျိုးချစ်စိတ်များဖြင့် တော့ မည်သို့ မျှ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ကြောင်း သမိုင်းသင်ခန်းစာများရပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့် ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအားလုံး နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးဖို့ သာအာရုံစိုက်စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ ဒီဖိုရမ်ကိုဖတ်ရတော့ လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်မှုများကို တွေ့ မြင်ရပါသည်။ တကယ်အမှန်တော့ စစ်အစိုးရသည် လူမျိုးခွဲခြားပြီးနှိမ်ထားခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ဗမာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖြစ်နိုင်လျှင် ပြည်မရှိဗမာပြည်သူများ၏ တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ထားသောသဘောထားများကို သွားရောက်ကာ စစ်တမ်းများကောက်ကြည့် စေချင်ပါသည်။ ဗမာတော်တော်များများက တိုင်းရင်းသားများအပေါ်တွင် ချစ်ခင်ကြသည်ထင်ပါသည်။တိုင်းရင်းသားများအပေါ်တတန်းထဲ ထား၍လက်ခံဆက်ဆံနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် အချို့ တိုင်းရင်သားများသည် ဗမာများအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ၊ ထိုသို့ သောသဘောထားအမြင်များကိုဝမ်းနည်းစွာပင်တွေ့ မြင်ရပါသည်။ ဒါကလည်းဗမာစစ်တပ်၏ ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် ရရှိလာသည့် အကျိုးဆက် ဟုပြောကြမည်ထင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ဗမာစစ်တပ်လို့ မမြင်ဘဲ စစ်အစိုးရဟုသာလူမျိုးရေးမပါဘဲခွဲခြားမြင်သင့် ပါသည်။အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးထို့ ထက်ပို၍နားလည်ကြဖို့ လိုနေပါသေးသည်။
The most important thing for peace making process between KIA and Myanmar army is honesty. Both side , whater they sayalot of complaints, they never want peace. They want power and money only. I don’t believe leaders of both side. One saying, ther isawill, there isaway. Both side have no will for peace. So there is no way. All are selfish liars with academy shot acting.
ကေအိုင်အေက ရထားလမ်း/ကားလမ်း တံတားတွေမိုင်းခွဲ၊ပြည်သူတွေ ကို အဓမ ဆက်ကြေး
ကောက်လို့ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးမရတာပါ။
ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး လွတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာတာ မအံ့သြပါဘူး ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလွတ်တော် ဗိုလ်သန်းရွေရဲ့ ကျွန်လွတ်တော် ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်နဲ့ကွာ စစ်အာဏာရှင်ကြီး အငြိမ်းစားယူလိုက်တယ်ဆိုပြီး လစာအပါဝင် အိမ်ခြံသန့်ရှင်းရေးကအစ ဗိုလ်သန်းရွှေ အတွက် လုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့ လွတ်တော်က ပြည်သူလွတ်တော် ဟုတ်ရဲ့လာဗျာ ဦးနှောက်သေနေတဲ့သူပဲ ယုံကြည်မယ်။ ဒီဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့လွတ်တော်ဟာ တိုင်းရင်းသားစစ်ဆင်ရေးမှာရော ရဟန်းတော်နှင့်တကွ ပြည်သူလူထုအပါဝင် နှိပ်စက်ရာမှာ နိုင်ငံတကာက အရေးယူမူဆိုင်ရာ ဖိအားများ ပေးလာမယ်ဆိုရင် ဖိအားပေးရန်မှ အကာကွယ်ပေးသွားရန် အသုံးချဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် ဒီလိုလွတ်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်သည်။ စောင့်ကြည့်ပါ ကချင်စစ်ပြီးရင် ကချင်စစ်ဆင်အရေးအတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဆိုပြီ ပေါ်လာမှာ သေချာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မဟာဝါဒီစနစ် ထာဝရတည်မြဲဖို့အတွက် ဒီလိုလွတ်တော် ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံကို ဗိုလ်ချူပ်မူကြီးသန်းရွှေ ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်သည်။